Dumarka uur-jiifka dumarka dumarka ah ayaa sabab u ah raali galinta isbitaalka; tijaabo socota - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Dumarka udubdhexaadka ah ee haweenka ayaa sababaya cudur-daar isbitaalka; dacwad socota
Hospital Sharp Grossmont in La Mesa, California, ayaa Isniintii soo saaray war qoraal ah oo uu ka badan dumarka 80 raali ku raad xarunta caafimaad, iyagoo sheegay in ay ahaayeen lama filaan ah diiwaangeliyey by kamaradaha shaqeysiin by mooshin lagu rakibay saddex qol oo qaas ah oo kala duwan. si loo soo qabto qofkii daroogada xadey.
Isbitaalka California ayaa raaligelin ka bixiyay dhowr haween ah toddobaadkan kuwaas oo dacwad ku soo oogay, iyaga oo ku andacoonaya in la filimay iyaga oo aan aqoon u lahayn hawlgallada gynecologicalka.
Hospital Sharp Grossmont in La Mesa, California, soo saaray war qoraal ah oo Isniinta. raali ka badan dumarka 80 raad caddaaladda ee xarunta caafimaad, iyagoo sheegay in ay la filaan ah diiwaangeliyey by kamaradaha mooshin shaqeysiin rakibay in saddex qol qalliin oo kala duwan si ay u qabsadaan qof daroogo xadday.
Saraakiisha Isbitaalka ayaa lagu ogaaday 2011 in qof uu qaadanayay "daroogo xoog leh" iyo qalab ka socda baabuurta suuxinta ee dhowr tiyaatir oo u shaqeynaya.
Iowa MAN HELO 12 MILLION DIB isbitaalka CAAFIMAAD KANSARKA xaasidnimo THE ma uu karin inuu heli tuug oo isticmaalaya "hababka kale ee baaritaanka," laakiin mas'uuliyiinta go'aansaday in uu soo dajiyo shaashad kombiyuutarka la camera a shaqeysiin by dhaqdhaqaaqa ee view si toos ah goobta.
"Xitaa haddii kaamirooyinka ayaa loogu talagalay in ay kaliya u qoraan dadka ku hor gaadhi suuxdinta, kuwa kale, oo ay ku jiraan bukaanadda iyo shaqaalaha caafimaad ee qolalka qalliinka ahaayeen mararka qaar la arki karo by kamaradaha iyo duubay oo aan buuq "Ayaa lagu yiri hadalka. akhriyo.
Maxkamadda dacwad ku qaadid saddex sano ka hor, hal haween ah ayaa sheegtay in ay diiwaan gashan tahay markii ay dhalaysay qalliinka degdega ah ee degdegga ah.
"Ujeedada baadhitaankani waxa weeye in la go'aamiyo qaabka tallaabada daawooyinka suuxinta. oo ka maqan si loo xaqiijiyo amniga bukaanka iyo tayada daryeelka, "ayaa lagu yiri bayaanka isbitaalka.
Tuugta ayaa ugu danbeyn la xiray iyada oo la isticmaalayo kamaradaha qarsoodiga ah iyo saraakiisha ayaa ku dhawaaqaya in shakhsiga uusan ku sii xirneyn isbitaalka.
inkasta oo aanu awoodin inuu ka hadlo xeer dheeraad ah, laakiin waxaa loo caddeeyo in videos ee su'aasha lagu qabtay a "wareegga ammaan ah" ka hor inta aan lagu gaadhsiiyo in labada dhinac saddexaad ee khilaafka.
HALKAN HALKAN KA HELO FIKRADO APP
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.foxnews.com/health/california-hospital-apologizes-after-more-than-80-women-say-they-were-secretly-recorded-during-gynecological-surgeries
Farshaxanka: "Tangué" ee King Lock Priso oo ku saabsan in loo celiyo Cameroon